Gawaarida Photoshop ee ugu wax ku oolka badan ee Windows | Abuurista khadka tooska ah
Markii aan saacado badan ku qaadanno la shaqeynta codsiyada naqshadeynta garaafka iyo gaar ahaan markaan ku lug leenahay mashaariic aad u dadaal badan oo u baahan beddelaad joogto ah oo qalab kala duwan ah, waa waxtar badan in la ogaado gaagaaban (Sidoo kale waad heli kartaa tan ururinta toobiyeyaasha naqshadeeyayaasha). Iyaga ayaa mahad leh, waxaan badbaadin doonaa waqti badan shaqadeenuna waxay noqon doontaa wax badan kacsan oo wax soo saar leh.
Halkan waxaan idinla wadaagaynaa amarrada Photoshop ugu wax ku oolka badan:
Qalabka: Waa inaad ogaataa in aaladaha badankood ay la xiriiraan bilowga magacooda Ingiriisiga, adigoo taas ogaanaya hubaal inay aad kuugu sahlan tahay inaad xusuusato:
Dhaqaaq qalab: V
Qalabka Marqueega qaabeeya:M
Saaxiibka sixirka: W
Qalabka Dalagyada: C
Burushka hagaajinta barta: J
Caday: B (Si aad wax uga bedesho cabirka burushkayaga, kaliya riix Ctrl + dhagsii badhanka midig ee jiirkayaga una gudub dhanka bidix ama midig). Sidoo kale leh «furaha,»Ama«.»Waan beddeli karnaa cabbirka iyo xitaa nooca burushka. Waxaan sidoo kale faragalin karnaa habsami u socodka burushkayaga (Wareejinta + D si loo yareeyo 25% iyo Wareeji + [ in sidoo kale lagu kordhiyo 25%). Si wax looga beddelo madhnaanta buraashkeena, waxa kaliya ee inala gudboon waa inaan riixno furayaasha tirooyinka (laga bilaabo 1 illaa 0) iyo inaad ka shaqeyso socodkaaga Furaha + furaha lambarka 1 ilaa 0).
Kaydinta maqaaladda: S
Taariikhda caday: Y
Rinjiga rinjiga: G
Xad dhaaf ah: O
Qoraalka Horudhaca ah: T
Xulashada waddada: A
Kooxaha qalabka: Waxa kale oo jira kooxo qalab ah, tusaale ahaan qaab-dhismeedka afar-geesoodka ayaa isu keenaya fursado kala duwan. Sideen ugu xulanaa qalabyada kala duwan ee ku jira kooxdan si dhakhso leh? Nidaamku waa mid aad u fudud. Si tan loo sameeyo waa inaan dooranaa furaha Shift + xarafka laxiriira koox qalab ah. Waqti kasta oo aan riixno furaha wareejinta waxaan dooran doonnaa qalab kale. Photoshop waxaan ku leenahay 17 koox oo qalab ah dhammaantoodna si isku mid ah ayaa loo helaa.
Midabada: Si aan ugu beddelno midabka hore gadaal iyo qeybsanaan, waa inaan kaliya riixnaa fure X iyo dib u soo celinta midabada asalka ah (midabka hore ee madow iyo midabka cad gadaal) riix furaha D.
Liisaska: Xaqiiqdii, qaar badan oo ka mid ah dariiqooyinka kala duwan ee laga heli karo menusyadu waxay noqon karaan kuwo aan macquul ahayn maxaa yeelay dhab ahaantii in badan oo ka mid ah xulashooyinkooda guud ahaan si joogto ah looma isticmaalo, markaa waxaan kugula talinayaa inaad barato kuwa aad inta badan isticmaasho.
Diiwaanka: Shakhsiyan, waxaan u adeegsadaa amarka xoogaa jeer Ctrl + N (in la abuuro feyl cusub), Ctrl + O (in la furo feyl), Ctrl + W (inuu xirmo daaqadda), Ctrl + S (hab wanaagsan oo aan ugu kaydin karno dukumintigayaga dariiq adag, waxay naga badbaadin kartaa dhacdo kasta oo lama filaan ah) iyo Ctrl + P (inaan daabacno faylkeena).
Daabacaadda: Markaan wax shaqo ah ka qabaneyno Photoshop waa wax iska caadi ah inaan qaladaad sameyno waana sababta ay muhiim u tahay in la ogaado toobiye-ka Undo (Ctrl + Z), Redo (Shift + Ctrl + Z) oo dib u noqo (Alt + Ctrl + Z). Sidoo kale Classics of Cortar (Ctrl + X), Nuqul (Ctrl + C) iyo Dhaji (Ctrl + V). Amarka buuxinta ayaa waliba waxtar yeelan kara (Wareeg + F5) taas oo aan si toos ah ugu dhajin karno lakabkayaga / lakabka lakabka, iyo aaladda wax lagu beddelo (Ctrl + T [+ Shift si loogu beddelo hab saami ahaan]).
Sawirka: Laga soo bilaabo menu-kan waxay noqon laheyd mid xiiso leh in la barto tuuryo si loo dalbado Tone otomaatig ah (Wareeg + Ctrl + L), Isbarbardhiga otomaatiga (Alt + Shift + Ctrl + L) y Midabka Aaladda (Wareeji + Ctrl + B).
Koofiyad: Gaar ahaan markaan dhammeyno halabuurkeenna waxaan badanaa isku darnaa lakabyadeenna, waxaan ku heli karnaa xulashadan adigoo riixaya Ctrl + E. Sidoo kale ku soo ururi iyaga Ctrl + G oo iyaga ungroup Wareejinta + Ctrl + G.
Xulista: Waxaan dooran karnaa dhammaan shiraacyadeenna adigoo riixaya Ctrl + A, Ka dooro Ctrl + D oo aan ku maalgalino xulkeena Ctrl + I.
Arag: Si loo kordhiyo dhaweynteena waxaan isticmaali doonaa Ctrl ++ iyo in la yareeyo Ctrl + -.
Miyaynu ku reebnay mid ka mid ah darbiga dhexdiisa? Ma kugula talinaysaa talooyin kale ama toobiyeyaal Photoshop ku saabsan Windows? Kala soocistaani waa mid shaqsi ah maxaa yeelay dhammaanteen kuma wada shaqeyno isku nidaam, haddii aad tixgeliso amar kale oo muhiim ah Noo sheeg iyada oo loo marayo faallo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Gawaarida Photoshop ee ugu ficilka badan Windows